Ngokwezifiso Engagqwali ukubiya Futhi Handrails Manufacturer | UJiannuo
Umkhiqizi Wemikhiqizo yensimbi engagqwali
I-Jiannuo Hardware Izothola Ukuqashelwa Kwamakhasimende amaningi Futhi Ukwazisa Ngekhwalithi Esezingeni Elifanele
Inkampani esebenzayo ehlanganisa ucwaningo nentuthuko, ukwakhiwa, ukukhiqiza, ukuthengisa, ukufakwa kobunjiniyela kanye nenkonzo yokuthengisa ngemuva kokuthengisa, ngokuyinhloko yenza izibambiso zensimbi ezingenasisekelo, amakholamu, izesekeli zokugezela, izengezo zodonga lwamakhethini, izibambo zeminyango, nezinto ezisetshenziswayo ezisekelwayo, izinsimbi zeshidi kanye eminye imikhiqizo yamaphrojekthi.
Isikhumulo Sezindiza saseChangi 4
Njengesikhumulo sezindiza lesikhombisa esimatasa kakhulu emhlabeni namuhla, Isikhumulo sezindiza iChangi yisikhumulo sezindiza esikhulu saseSpain nendawo enkulu yokundiza e-Asia. Isikhumulo Sezindiza Esisanda kuvulwa seChangi 4 isakhiwo esinezitezi ezimbili, amamitha angama-25 ukuphakama sinezindawo ezingama-225,000 metres. Kulindeleke ukuthi inyuse umthamo okhona wabagibeli abafinyelela kwizigidi ezingama-82 ngonyaka. Njengomkhiqizi okhethekile emkhakheni wehardware, uFoshan Jiannuo Hardware Co, Ltd wayehlonishwe kakhulu ukubamba iqhaza kulo msebenzi ngokusebenzisana nekhasimende lethu eSwitzerland. I-JN yayibhekene ngokuyinhloko nengxenye yensimbi engenacala: uhlelo lwe-iron stainless railing, insimbi engenacala ye-anti-ukushayisana ukushayisana, njll.
Enye yezitolo zokugcina ezitolo ku-Orchard Road ngaphambi kokufika esifundeni saseCoric, i-Orchard Central iyindawo emide kunazo zonke yokuthenga yaseSwitzerland enezici ezihlukile njengezakhiwo zayo zeglasi kanye nomdwebi wendawo uMark Ngui odonsa iso lobuciko. Inezici eziningi engingaqhosha ngazo ngokufaka phambili imakethe yedolobha yaseMedithera yokuqala, udonga olukhuphuka kakhulu emhlabeni iVia Ferrata, iqoqo elikhulu kunawo wonke lokufakwa kobuciko bomphakathi ngabaculi bamazwe bamazwe abamnyama, i-24/7-Roof Garden and Discovery Walk. Njengomkhiqizi okhethekile emkhakheni wehardware, uFoshan Jiannuo Hardware Co, Ltd wayehlonishwe kakhulu ukubamba iqhaza kulo msebenzi ngokusebenzisana nekhasimende lethu eSwitzerland. I-JN yayibhekene kakhulu nengxenye yensimbi engenacala: uhlelo lokuphonsa insimbi engenacala, njll.
UMarina One, obizwa nge- "GREEN HEART" noma "GREEN KAHLE", indawo ephakeme kakhulu, eyakhiwe ngokuxuba ukusetshenziswa kwenhliziyo yesifunda esisha saseMarina Bay saseSingapore, ugcwalisa umbono we-Urban Redevelopment Authority (URA) wokwenza iSingapore ibe " Idolobha elisengadini ", selibe yindawo entsha yokwakha uphawu eS Singapore uma seliqediwe. Njengomkhiqizi okhethekile emkhakheni we-Hardware, uFoshan Jiannuo Hardware Co, Ltd wayehlonishwe kakhulu ukubamba iqhaza kulo msebenzi ngokusebenzisana nekhasimende lethu eSwitzerland. I-JN yayibhekene ngokuyinhloko nengxenye yensimbi engagqwali: isistimu engenzi ngensimbi engenasici, ibacket yensimbi engenasici, izinsimbi ezifakwa ngensimbi engagqwali, ukugqokwa kwensimbi engenasici, ukuhloba kwensimbi ye-electroplate eyindilinga yesikrini, i-grating yensimbi engenacala, i-rack yensimbi engenasici. , udoti wokunethezeka wensimbi engenasici, ibollard yensimbi engenacala, ukubhajwa kwensimbi yokubhukuda yensimbi engenacala, njll.
Iphrojekthi yaseSengkang Hospital iphumelele uMklomelo wePlatinamu weGreen Building Authority's Green Building Mark. Le phrojekthi, ehlanganisa indawo engaba amamitha-skwele angama-228,000, isikhungo sokunakekelwa kwempilo. Inesibhedlela esimaphakathi, isibhedlela somphakathi nemitholampilo eminingi ekhethekile. Ngemuva kokuphothulwa, kuzovumela ukuthi izidingo zezempilo zabahlali eShe Gang zisingathwe ngendlela. Njengomkhiqizi okhethekile emkhakheni we-Hardware, uFoshan Jiannuo Hardware Co, Ltd wayehlonishwe kakhulu ukubamba iqhaza kulo msebenzi ngokusebenzisana nekhasimende lethu eSwitzerland. I-JN yayibhekene ngokuyinhloko nengxenye yensimbi engagqwali: uhlelo lwensimbi olungenasici, ukujikijela okwenziwa ngensimbi engagqwali, ipuleti yensimbi engagxili eyindilinga, njll.
I-Jiannuo Hardware yakha iqembu lobuchwepheshe eliqinile eliholwa onjiniyela abaphezulu, abaqambi kanye nabasebenzi abangochwepheshe kwezobuchwepheshe. Sethule imishini yokukhiqiza yangaphandle ethuthukile, futhi imikhiqizo yayo ikhiqizwa ngokuhambisana nezinqubo zobuchwepheshe ezijwayelekile.
Ihlose ukuhlinzeka amakhasimende ngekhwalithi ephezulu, usizo, inoveli nokubukeka okuhlukile. Umkhiqizo. Ngasikhathi sinye, iKenuo Hardware ihlala ithuthukisa ubuchwepheshe obusha, izinqubo ezintsha, nemikhiqizo emisha efanelekile ngehardware yesimanje yokuhlobisa ukuze ivumelane nokuthuthuka kwemakethe.
Nikeza amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphakeme, esebenzayo, yenoveli nemikhiqizo eyingqayizivele. Ngasikhathi sinye, iKenuo Hardware ihlala ithuthukisa ubuchwepheshe obusha, izinqubo ezintsha, nemikhiqizo emisha efanelekile ngehardware yesimanje yokuhlobisa ukuze ivumelane nokuthuthuka kwemakethe.
I-Jiannuo Hardware izothola ukuqashelwa kwamakhasimende amaningi nokwazisa ngekhwalithi enhle.
Ikhasimende kuqala, isiqinisekiso sekhwalithi, Dala imikhiqizo esezingeni eliphakeme yenoveli.
Isembozo sensimbi esingenasici, ikhava kahle, ikhava yokucwila
Isembozo sensimbi engagqwali, ikhava yensimbi engagqwali, ikhava yensimbi engagqwali, ikhava yensimbi engagqwali, ikhava yensimbi engagqwali, ikhava yesikwele, ikhava yesikhumulo sezindiza, ikhava yomphakathi.
I-Stainless Metal Curtain
Ama-Metal CDUCOROROURWERor Urrains enziwe ngezindandatho zensimbi ezixhumene nochungechunge, enikeza abantu umuzwa wokulengiswa kanzima, obekwe kahle kakhulu. Amakhethini ensimbi alungele umhlobiso emakhaya, izitolo ezinkulu zezitolo, izikhumulo zezindiza, amafulethi kanye nezinye izindawo, ukuze isikhundla singandiswa smart.
Ikholomu yensimbi engagqwali igqoke ukufakwa kwamapayipi, inhloko yensimbi engenasici, ikhava yensimbi engagqwali
Insimbi engagqwali i-bracket yensimbi engagqwali engagqwali esingenakubanzi esidabukisa insimbi engagqwali
Ubakaki wensimbi engagqwali; Insimbi engenalutho yensimbi emnyama; Isixhumi sensimbi engenasici
Njengamanje, iJiannuo isisungule inethiwekhi eqinile yokuthengisa kanye nenethiwekhi yokuthengisa ngemuva kokuthengisa futhi isungule isithombe esihle sebhizinisi, esiye saziswa futhi samukelwa amakhasimende ethu.
Sikholwa ukuthi ngaphansi komqondo wesevisi wokuthi "ikhasimende kuqala, ikhwalithi kuqala", iKenuo Hardware izokwaziwa futhi ithokozelwe ngamakhasimende amaningi ekhaya nakwamanye amazwe, futhi izoqhubeka nokuthuthuka futhi ibe namandla.